February 2020 – siifsiin
Aadaa Oromoo keessaa ijoollee hurursuun aadaa gaarii qabnu keessaa tokkodha.Huruursuun Sossobuu ykn Afaan Ingiliziitiin “lull”kan jedhamu waliin caalaa wal gitu danda’a. “Hush” inni jedhamu kun “usi”ykn “callisi” kan nuti jennu waliin wal gita. Ingilizootis ijoollee haala nuti sossobnuun ykn huruursinuun huruursu waan ta’eef dhimma kana irratti aadaa walfakkaatu qabna jechuu dandeenya.Aadaan keenya kun utuu hin … Continue reading Ijoollee hurursuun
Baay’een na yaachisa Akkamiin gadi ciisa Jiruun nama tokko Maaliif na yaaddessa Waggaa meeqa jiraatu Biyyaa lafaat irra Yaaddoo an hin cabsadhu Mee kaasaa na irraa Boo’een hin cabsadhu Ba’ees hin boqadhu Ba’ii badiinaan jedha Maaliif hin baqadhu? Eessatti baqadha Eenyuttan baqadha Orma na in beekne Lubbuu koo maal nyaadha Maraachuun koo hin hafne Qullaa … Continue reading IMIMMAAN YAADAA
Mirgoota Namoomaa Idil-Addunyaa Keewwata – 22
Namni kamiyyuu akka miseensa hawaasichaatti wabii jireenyaa argachuuf mirga qaba. Karaa carraaqa biyyaa waliigaltee adunyaas, akkasumas akka qabeenyaa fi caasaa biya isaattis, ulfina guddina mataa isaaf waan barbaachisaa ta’an mirgoota dinagdee, hawaasummaa fi kan aadaa ni qaba.
Mirgoota Namoomaa Idil-Addunyaa Keewwata – 21
Namni kamiyyuu mootummaa biyya isaa keessatti kallattiidhaan ykn karaa bakka bu'oota isaa kanneen bilisaan filatamanii hirmaachuuf mirga ni qaba.Namni kamiyyuu tajaajila mootummaa biyya isaa keessaatti namoota biroo waliin walqixa fayyadamuudhaaf mirga ni qaba. 3. Bu'uurri aangoo mootummaa fedhii ummataati; fedhiin ummataatiis kan ibsamu yeroolee murteeffamanitti filannoowwan adeemsifamaniin hoggaa ta'u; filannoowwan kunneen nama hundaaf carraa walqixaa … Continue reading Mirgoota Namoomaa Idil-Addunyaa Keewwata – 21
Yoo Nama Taate
Jaalala baay’isi.Beekumsa ida’i.Qabeenya hiri.Inaaffaa hir’isi.Ilaalcha wal-qixxeessi.Hojii guddisi!Teessuma xiqqeessi. Jaalalli Dhugaa: Mi’aawaadhaa dhandhamadhu.Urgaawaadhaa fuunfadhu.Gammachuudhaa simadhu.Icciitiidhaa eeggadhu.Dorgommiidhaa itti hirmaadhu.Qabsoodhaa injifadhu.Abdiidhaa obsaan eeggadhu.Qabeenyaa horadhu.Bultiidhaa ijaaradhu.Gaaddisaa jala boqadhu!
Kaleesa fi har’a
DURII FI HAR'A ..DUR Duumessa jaalalaatu Lafa keenya uwwisa Ijoolleetu gad-jedhee Maanguddoota dubbisa HAR'A... Jaalalli dhidhimee Jibbi guutee lafa! Safuun biyyaa ba'ee Fakkaateera fafa! .. .. DUR... Hunduu qixa qaba; Ormi dinqa hinlixu! Fo'aan dhugaan dhufe Ololaan hincitu! .. .. HAR'A... Sobatu shubbisa; Dhugaatu gad-jedhe! Gadheen dinqa bulee, Dubbata waan fedhe! Gammach G.
Jaalala onneeBeekumsa sammuuObsa garaaDhugaa arrabaaOgummaa harkaa qabadhu! Bara Jireenya Kee Keessatti: Kan dabarsite yaadadhu.Kan keessa jirtutti jabaadhu.Kan itti deemtuuf abdiin jiraadhu.Bakka yaadde gahuuf obsa qabaadhu.Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu!
Malaan duulan jette andaaqqoon (lukkuun)
Yeroo tokko, andaaqqoo, hantuuta, bofa, ruumicha fi leenca ta’anii gamtaadhaan duula deemuuf waliin mari’atan. Kaayyoon duula kanaas deemanii loon hatuuf ture. Amma deemanii deemanii bakkee dhaquu barbaadanitti yogguu dhiyaatan, dhaabbatanii (ejjetanii) akkamitti akka loon hatan waliin haasa’uu fi hojiis addaan qoqqooddachuuf karoora baafatan. Kana keessatti kan karoora baastu andaaqqoo turte. Andaaqittiinis akkana jettee karoora ibsiti: … Continue reading Malaan duulan jette andaaqqoon (lukkuun)
Sirna fuudha fi Herumaa kutaa lama
2) Ababbalii ykn Hawwii Inni kun ammoo osoo warri hin beekiin warri walfuudhan waliif galanii walfuudhuu ta’a. Gurbaa fi isheen qofti walii galuudhan haala mijeeffachuun gurbaa intala beellamee fudhatee gala. Yeroo kanatti maatiin gurbaa beeku danda’u kan ishee intalaa garuu hin beekan. Adeemsa keessaa gurbaan guyyootamuraasa booda gara maatii isheetti jarsummaa ergachuun araaramuuf karaa bana. … Continue reading Sirna fuudha fi Herumaa kutaa lama
Qorichawwaniifi baala Haraaraa (Araada) Nama qabsiisan Sadarkaa adduunyaatti, namooti tokko tokkoofi hawaasni, rakkoowwan qoricha dhorkamanii isaan muudataa jira. Qoricha hin hayyamamineen fayyadamuudhaan,namooti dandeettii isaanii akka hindhugoomsine / humna keessa isaanii, guutumaan akka hin mul’isine/ kan isaan ittisuufi guddina hawaasaafis guufuu ta’an jiru.Gabaabumatti qorichawwan kunniin, fayyadamtoota, maatii,uummatafi hawaasa irratti,rakkoo hamaa kan geessisanidha.Addunyaa’rratti qorichawwan seeraan dorkaman,to’annoo ala … Continue reading Qorichaafi Baala Saammuu Haddoochan